Andro maneran-tany ho an’ny Radio: « Mampivelatra ny kolontsaina ny Radio », hoy i Audrey Azoulay | NewsMada
Andro maneran-tany ho an’ny Radio: « Mampivelatra ny kolontsaina ny Radio », hoy i Audrey Azoulay
Nankalazaina ny 13 febroary teo ny Andro maneran-tany ho an’ny Radio, andiany fahasivy. Fotoana nitondran’i Audrey Azoulay, tale jeneralin’ny Unesco hafatra ho an’ny olon-drehetra.
Lohahevi-dehibe novoizina tamin’ity Andro maneran-tany ho an’ny Radio ity ny : “Samy hafa, samy onjam-peo, iray ihany isika”. Ho an’i Madagasikara, ny sekretera jeneralin’ny vaomieram-pirenena malagasy ho an’ny Unesco, Ravelojaona Manda Herilaza, no nampita Hafatra avy amin’ny Audrey Azoulay, tale jeneralin’ny Unesco. “Noho ny fahalalahana azo avy aminy, fitaovana iray ahafahana mampiroborobo ny fahasamihafana eo amin’ny lafiny kolontsaina ny Radio. Ho an’ny olona niaina tamin’ny fahagolantany, io no hany fitaovana ahafahana mifampizara traikefa, mampiroborobo ny kolontsaina ary maneho hevitra, araka ny fiteniny. Toy izany ihany koa ireo onjam-peom-pikambanana (radios communautaires) izay anehoan’ny olona ny heviny manoloana ireo olana mitranga eny amin’ny fiarahamonina. Izany indrindra no mahatonga ny Unesco hanohana hatrany ireo onjam-peo maro samihafa mba hahafahan’izy ireo mivoatra hatrany”, hoy izy.
Nohamafisin’ny tale jeneralin’ny Unesco, tamin’ny alalan’ny fampitan-kafatra nentin’ny sekretera jeneralin’ny vaomieram-pirenena malagasy ho an’ny Unesco hatrany fa : ”Io fahasamihafana io dia miainga, ary tokony ho hita taratra avy amin’ireo mpikirakira eo anivon’ny onjam-peo. Anisan’izany ny mpandrindra ny fandaharana, ny mpanao gazety, ny teknisiana, ny tompon’andraikitra momban’ny feo, sns, satria samy manana ny anjara andraikiny avy izy ireo. Noho izany, ny tontolon’ny onjam-peo dia azo lazaina fa tontolo ahitana fahasamihafana. Fahasamihafana izay azo sokajiana ho haren’ny fiarahamonina ary antoka iray mampiakatra ny kalitaon’ny asa famoronana sy ny vokatra vokarina eny anivon’ireny onjam-peo ireny”.
Marihina fa nisy ihany koa ny fifanakalozan-kevitra notanterahin’ireo mpianatra avy ao amin’ny Lycée Jean Joseph Rabearivelo. Lohahevitra tamin’izany : “Ny tanora sy ny radio” izay ho fitohizan’ilay tetikasan’ny ComNat/Unesco, “Les lycéens au micro”. Nasongadina manokana fa manoloana ny firoboroboan’ny teknolojia sy ireo karazana tambajotran-tserasera misy amin’izao fotoana, mbola ny Radio no mitana ny laharana voalohany eto Madagasikara amin’ny fizarana sy fampitam-baovao noho izy afaka sitrahan’ny olon-drehetra, indrindra ho an’ireo izay any amina toerana lavitra sy ho an’ireo marefo sy sahirana ary amin’ny vanim-potoana rehetra.